La Grande braderie de Madagascar Vehivavy roa tratra nangalatra
Lasan’ny karana ny tany Nanao ampamoaka ny fokonolona
Naneho ny tsy fahafaliany tamin’ny fanotorana ny tany izay efa nohajariana nandritra ny 20 taona ny mponina ao Ankorondrano, ka nametraka sorabaventy hoe “tsy ekenay ny fangalana ny taninay, izay efa nohajarianay an-taonany maro”,
Lehilahy mpiray dina Maty notetitetehina
Maty novonoin’ireo tsy mataho-tody ny lehilahy iray, izay voalaza fa mpikambana sady mpiray dina, momba ny fandriampahalemana. Notetitetehin’ireo jiolahy ilay rangahy ary tsy hita teny amin’ny vatany ny tongony anankiroa.
Fivarotan’olona Dimy ireo nampidirina am-ponja vonjimaika
Tranga niseho matetika teto amintsika tato ho ato ny fanaovana olombelona ho entam-barotra.
TSARAFARA MORAMANGA 8 km isan’andro ny dian-tongotra ataon’ny mpianatra
Tena mijaly amin’ny fitadiavana sekoly ireo mponina ao amin’ny faritra Nosibefody, fokontany Tsarafara, kaominina sy distrikan’i Moramanga.
Fikambanana mitaiza zaza kamboty ao Mahajanga Notoloran’ny orinasa Star fanampiana
Tsy nanadino ny ivontoerana “Les enfants de la Sainte Famille » manabe sy mikolo ireo zaza kamboty ao Mahajanga ny orinasa Star nandritra ny fandalovany tany an-toerana tamin’ny alalan’ilay hetsika Star tour,
Fanabeazana ny tanora Notokanana omaly ny “Coin Jeune” CEG 67ha
Notokanana omaly ny ivontoerana ho an’ny tanora, atao hoe : « Coin Jeune », eny amin’ny CEG 67ha.
Olan`ny famatsian-drano Hovahana hatramin’ny faran`ny volana
Taorian`ireo tabataba sy fitokonana maro samihafa noho ny fahatapahan-drano teto an-drenivohitra dia nivoaka tamin`ny fahanginana ny fitondram-panjakana.
Nifarana ny Alahady 26 Mey lasa teo ilay hetsika la grande braderie de Madagascar notanterahina tetsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina, nokarakarain’ny Madavision.
Tratra ny tanjona tamin’ny ankapobeny, raha araka ny fanazavan-dRamanantsoa Harilala, mpikarakara. Na izany aza anefa dia notsindriany manokana fa tena ambany ny fahefa-mividin’ny malagasy saingy samy niezaka ny nanao izay mety ny tsirairay, indrindra fa tamin’ny fiatrehana ny fetin’ny Reny. Ankoatra ireo mpiantsena anefa hoy izy dia tafiditry ny mpangalatra ihany koa ny hetsika ka vehivavy roa samihafa no tratra tamin’izany ary efa natolotra ny mpitandro ny filaminana. Nisy ihany koa ireo trano eva izay tratran’izy ireo tsy nanao fihenam-bidy nandritra izany ka efa nandraisana fepetra ihany koa.